म जस्तै उ जीव हो, हत्या नगर
ज्यानको आशा सवैलाइ हुन्छन,फत्ते नगर
शान्तिमा जिउनु छ,सुख नखोस
निर्दोष प्राणी निरही ठानी, मृत्यु नहोस
यस्ले नबोल्न सक्छ, न गुनासो पोख्न सक्छ
प्राणी हत्या अपराध भनी, कस्ले रोक्न सक्छ
म जस्तै उ पनि ..............................
छोराछोरी झै हुर्‌काउछौ , दानापानी खुवाइ
अन्तमा किन मार्र्छौ, घाँटी सर्काइ
न दैव बोल्छ न त छ बाँच्ने, जिउने अधिकार
सवै बाँच्न पाउने, कैले होला संसार
म जस्तै उ पनि......................................
राम्रो सिधा र सहि कुरा। किन बिर्सेको होलाहै मानिसले यो कुरा। धर्मको नाममा यसरि कुनै काम नगरे हुन्थ्यो।
मलाइ चित्त नबुझेको कुरा के भने पसलमा गएर कुखुराको मासु ल्याउनु हुन्छ, तर कसैले आफ्नो आश्थाको लागी त्यही कुखुरा चढाएको ठुलो अपराध हुन्छ। मन्दिरमा दिइएको बलिको फोटो खिच्नेले बधशालमा गएर हेरे कसो होला?
मलाई त 'वाहियातै' लाग्न थालिसक्यो यो पशुबलिको विरोध । चाहिनेभन्दा बढी नै भो ।
नेपालीयन र पुष्प जीको बिचार सँग मेरो बिमती छ। बधशालामा गरिने बध कुनै धर्म र भगवानको नाममा खुशी पार्न गरिदैन त्यो मानब भुँडीलाई खुशी पार्न गरिन्छ। र , बधशाला भनेको कानुन सम्मत बन्द कोठामा गरिने बध हो । तर बली भनेको अमुक र अद्रिश्य शक्तीको नाममा गरिने अन्धमत्तताको परोक्ष नमूना हो। हिन्दू धर्मको नाममा गरिने यस्ता बली प्रथा धर्मको नाममा कलंक पनि हो। कसैलाई रगत सँग लत्पतिएर खुशी महसुस हुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन तर बलीलाइ बधशाला सँग बराबरी बनाउनु ठीक होइन होला।
मलाइ पनि चित्त बुझ्यो है पुष्प जी , अब भने अती नै भयो। यो त बिरोधको लागी बिरोध जस्तो पो भयो।
एनोमिस जी पशूलाइ यातना दिएर मार्नु भने भएन हैन भने बन्द कोठामा बध गर्नु र मन्दीर अगाडी बध गर्नुमा के फरक देख्नुभयो? कि अब अमेरीकाको थेन्कस गिभीगं मा खाइने टर्की देखी नेपालमा मनाइने दशैं को खसीको पनि उत्तीकै बिरोध हुनु पर्यो, अनि चिकन देखी ससेज सबै को उत्तीकै बिरोध उठाउनु पर्यो।
नत्र भने आफ्नो धर्मको आधारमा बली दिन पनि नपाइने? कि खसी रांगा लोप हुन लागेको जनावरको सुचीमा पर्नु पर्यो नत्र एउटा सानो गाउंमा भएको पूजाको बिरोध उही नेपालमा भइरहने गंजागोल तन्त्रकै एउ रुप मात्र हो।
मैले भनिहले नि नेपालीयन जी, देबी देवताको नाममा पशु बली दिएर कसैलाई खुशी महशुस हुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन। अन्ध विश्वासको यती बिधी हात धोएर लाग्नु होला जस्तो लागेको थिएन। दशै होस् या थ्यांक्स गिभिङ पशुहरुको बली दिदै खुशी मनाउनु बेहोशी संस्कार हो। धर्मले सिकाएको यो पाठ हो भने धर्मलाई अफिम नै प्रमाणित गरे पनि फरक हुने छैन।
यहाँ कुरो धर्म को भन्दा पनि hygiene को साथ साथै क्रुर पशु बलि को हो, मेरो लागि । गतिलो ठांउमा बलि दिनाले health-hazard रोक्न सकिन्छ, अनी त्यो hygienic पनि हुन्छ । अनि पशु बध गर्ने नै हो भने पनि तिनीहरुले के गर्द कम सकस पाएर मर्छन भन्ने कुरो मा बिचार गर्दा राम्रो होला । बधशालामा बध गर्दैमा in-human तालले बध हुन्छ भन्ने पनि छैन । यि दुबैमा बिचार पुराउनु पर्‍यो ।
यो बिरोधलाई कृपया undermine नगरौं ।
Correction: बधशालामा बध गर्दैमा in-human तालले बध हुन्न भन्ने पनि छैन फेरी । यि दुबैमा बिचार पुराउनु पर्‍यो ।